ဒူဒူကြီး: Control Valves (၃) - Control Valve Capacity
'Three - port valves' တွေကို mixing (or) blending အတွက်သုံးမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် diverting အတွက် သုံးမှာလားစတဲ့ application တွေအတွက်၊ plug နဲ့ seat arrangement အပေါါမူတည်ပြီး၊
Fig. Three - port mixing (or) blending valve
"Mixing valve" ဆိုတာကတော့ inlet port (၂) ခုနဲ့ outlet port (၁) ခုပါဝင်တဲ့၊ valve လို့သိရပါတယ်။ outlet ဖြစ်တဲ့ port (AB) ဟာ၊ constant volume port ဖြစ်ပါတယ်။ valve ရဲ့ opening amount ပမာဏဟာ၊ inlet port (A) နဲ့ (B) အပေါါမှာသာမူတည်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် valve ရဲ့ internal mechanism မှ၊ opening amount ပမာဏဟာ ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်း မဟုတ်ဖူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ inlet port (A) နဲ့ (B) မှာ၊ linear characteristic ရှိမှသာ၊ outlet port (AB) မှာ constant output volume condition အနေနဲ့၊ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Three - port diverting valve
"Diverting valve" ဆိုတာကတော့၊ inlet port (၁) ခုနဲ့ outlet port (၂) ခု ပါဝင်တဲ့၊ valve လို့သိရ ပါတယ်။ Three port valve တွေကို၊ Piston valve type, Globe plug type နဲ့ Rotating shoe type ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားထားပါတယ်။
Fig. Piston valve (shown asadiverting valve)
"Piston type three - port valve" မှာ၊ hollow piston ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ actuator ဟာ piston ကိုအထက်အောက်၊ up and down movement ဖြစ့်ရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ outlet port (A) နဲ့ (B) ဟာ၊ အရွယ်အစားတူညီတဲ့ fluid transit area ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ cumulative cross-sectional area ဟာလည်း၊ အမြဲတမ်းတူညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ piston ဟာ အထက်အောက်ရွှေ့လျှားတဲ့ အခါ၊ outlet port (A) နဲ့ (B) မှာ အပိတ်နဲ့ အဖွင့်ဆိုတဲ့ covering and correspondingly uncovering အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ အကယ်၍ port (A) ဟာ (30) % ခန့်ပွင့်တဲ့အခါ၊ port (B) ဟာ (70) % ခန့်ပွင့်မှာ ဖြစ်သလို၊ အပြန် အလှန် သဘောအရ port (A) ဟာ (70) % ခန့် ပွင့်တဲ့အခါ၊ port (B) ဟာ (30) % ခန့် ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ piston type valve ဟာ၊ flow ကို inherently balanced အနေနဲ့ အမြဲတမ်း အလိုက်သင့် ညီမျှနေစေမှာဖြစ်သလို၊ self acting control အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်တယ်လို့၊ သတ်မှတ်နိုင် ပါတယ်။
Fig. Globe type three-port valve
"Globe type three - port valves" တွေကို၊'Lift and Lay' valve လို့လည်းခေါါလေ့ရှိပါသတဲ့။ disc ဒါမှမဟုတ် အစုံလိုက်တတ်ဆင် ထားတဲ့ plug တွေကို၊ valve body အတွင်းမှ seat (၂) ခုအကြား အထိုင် ချထားပါတယ်။ actuator ဟာ၊ disc ဒါမှမဟုတ် plug အစုံကို၊ အထက်အောက်၊ up and down movement ဖြစ့်ရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ disc ဒါမှမဟုတ် plug တို့ရဲ့ ရွှေ့လျှားမှုကြောင့် port (A) နဲ့ (B) မှာ၊ fluid flow အတိုးအလျှော့ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။
Fig. Plug skirt modified to givealinear characteristic
plug ရဲ့ linear characteristic ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့၊ plug skirt ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို၊ modified အနေနဲ့ ပြောင်းလဲကာ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့၊ globe type three-port valves တွေလည်းရှိပါတယ်။
Fig. Rotating shoe onamixing application
"Rotating shoe type three - port valve" မှာ၊ shoe ဟာ၊ inlet နဲ့ outlet port surface မျက်နှာပြင်မှာ shuttle အနေနဲ့ ရှပ်ကာ ပွတ်တိုက်ပြီး၊ ရွှေ့လျှားပါတယ်။ shoe ရွှေ့လျှားမှုကြောင့်၊ အကယ်၍ port (A) ဟာ (80) % ခန့်ပွင့်တဲ့အခါ၊ port (B) ဟာ (20) % ခန့်ပွင့်မှာဖြစ်ပြီး၊ port (AB) ကတော့ (100) % အပြည့်ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်သဘောအရ port (A) ဟာ (20) % ခန့် ပွင့်တဲ့အခါ၊ port (B) ဟာ (80) % ခန့် ပွင့်မှာ ဖြစ်သလို၊ port (AB) ကတော့ (100) % အပြည့်ပွင့်နေမှာ၊ ဖြစ်ပါတယ်။
Three port valve တွေကို၊ Piston valve type, Globe plug type နဲ့ Rotating shoe type ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားထားပေမယ့်၊ valve တိုင်းကို mixing နဲ့ diverting service (၂) မျိုးစလုံးအတွက်၊ အသုံးပြုလို့ မရတာတွေ့ရပါတယ်။ mixing valve အနေနဲ့ အသုံးဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့၊ globe valve ကို၊ diverting valve အဖြစ်သုံးထားတဲ့၊ incorrect application ကို နမူနာအနေနဲ့ ဖော်ပြပါဦးမယ်။
Fig. Plug type diverting valve
diverting valve အနေနဲ့ အသုံးပြုမယ့်၊ plug type valves တွေမှာ၊ seat ရဲ့ configuration လို့ခေါါတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်အနေအထားကို၊ ပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။ seat ရဲ့ configuration ပြောင်းလိုက်တဲ့ အခါ၊ actuator ဟာ piston ကို အထက်အောက်၊ up and down movement ဖြစ့်ရွှေ့လျှားနေချိန်မှာ differential pressure ဟာ plug ရဲ့ (၂) ဖက်စလုံးမှာ၊ အညီအမျှသက်ရောက်သလို၊ အထက် မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို၊ linear characteristic ကိုလည်း ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ close circuit တွေမှာတော့၊ system design ပေါါမူတည်ပြီး၊ mixing valve ကို၊ diverting valve အနေနဲ့၊ သုံးနိုင်သလို၊ diverting valve ကိုလည်း၊ mixing valve အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Fig. Mixing Valve installed on the return pipework
mixing valve ကို၊ diverting function အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်စေတဲ့၊ application ကို၊ နမူနာအဖြစ်ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ inlet port (၂) ခုနဲ့ outlet port (၁) ခုပါဝင်တဲ့ mixing valve ကို၊ load ရဲ့အထွက်၊ return line မှာတတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ load ကို၊ divert function အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်၊ heat exchanger ဖြစ်တဲ့ load အပေါါမှာ သက်ရောက်မယ့်၊ hot water ပမာဏဟာ၊ ကျဆင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
heat source ဖြစ်တဲ့ boiler စတင်လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ port (A) ဟာ fully opened position အနေနဲ့ ပွင့်နေပြီး၊ port (B) ကတော့ fully closed position ဖြင့်ပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ heat exchanger ဟာ maximum heat condition အထိလက်ခံကာ၊ အအေးခံပြီး boiler သို့ port (AB) မှတဆင့် ပြန်ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ condenser ဖြစ်တဲ့ heat exchanger မှာ၊ အအေးခံဖို့မလိုအပ်တဲ့ satisfied heat load condition ရောက်သွားတဲ့အခါ၊ port (A) ဟာ၊ fully closed position ဖြင့်ပိတ်သွားပါတယ်။ port (B) ကတော့ fully opened position အနေနဲ့ ပွင့်သွားပြီး၊ bypass line မှတဆင့်၊ port (AB) မှတဆင့် ဖြတ်ပြီး၊ boiler သို့၊ ပြန်ပို့ပေးပါတယ်။
Fig. Diverting valve installed on the flow pipework
diverting valve ကို၊ diverting function အနေနဲ့ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်စေမယ့်၊ application မှာတော့၊ load ရဲ့ အဝင်မှာပဲ၊ တတ်ဆင်ကြပါတယ်။
Reference and Image credit to : Control Valve Capacity - ကိုထွန်း, Control Hardware : Electric/ Pneumatic Actuation, The Steam and Condensate Loop Book, ISBN 978-0-9550691-5-4, 2011. Copyright © 2012 Spirax-Sarco Limited, and Steam Engineering Tutorials.
Posted by ဒူဒူကြီး at 16:50